Heavy Job မှ Easy Job ဖြစ်စေတဲ့ MAN TGA-33- 530 / TGA-41-530 / TGX-41-680
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ် ကိုရစ်ကီကျော်သည် တာဘိုဆရာကြီး UK Mike ရေးသားသည့် လွန်စွာပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ် ကောင်းသော variable geometry turbo (VGT) Hassles ဆောင်းပါးကို ဂျပန် Volvo FM နှင့် Nissan GH12 / GH13 ပြသနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ် ဖတ်ရှု့နေခိုက် ကျွန်ုပ်၏ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေသည့် Samsung Galaxy S8 မှ မြမြ၏ညည်းသံ Ring Tone မြည်သံကြောင့် စိတ်ရွင်လန်းစွာဖြင့် ပြန်လည်ပြောဆိုမိရာ ...
ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါ ဆိုက်ဆရာ၊ ပြောပါခင်ဗျ ဘာများကူညီဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ၊ ဒီလိုဗျ ကျွန်တော်တို့ တန်၄၀၀ လောက် အလုပ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စရှိလို့ ဆရာ့နေနဲ့ ကားတွေကိုလိုအပ်တာ ထပ်ပြီးစစ်ပေးစေချင်တယ်၊ အင်နဲ့အားနဲ့ လုပ်မယ့်ကိစ္စဖြစ်တော့ Down Time ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူး၊ လိုအပ်တဲ့ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေ ဆရာ့ဆီမှာ လုပ်နေသော်ငြားလည်း ပွဲမဝင်ခင် သေချာချင်တဲ့သဘောပါသလို၊ အချို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု့ Operation Risk Calculation တွေသုံးသပ်ရာမှာ ဆရာ့ အကြံပေးချက်တွေပါဝင်တဲ့အခါ လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ထား လို့ရအောင်.... စသည်ဖြင့် ချစ်ခင်နာပျော်ဖွယ်ရာ စကားထိုထိုတို့ ပြောဆိုလာတဲ့အခါ ... အချိန်ဘယ်လောက်ရမလဲ ဆိုက်ဆရာဆို တော့ ... နာရီ ၁၂၀ ... ပြင်ဆင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့အချိန်ပါ ... အိုကေ အလုပ်စကြစို့ ...
သုံးမယ့်ကားတွေဖြစ်တဲ့ TGA-530 8x4 ရယ် TGX-680 8x4 ရယ် TGA-530 6x4 … ကနဦးအနေနဲ့ စစ်ဖို့ရာက Over Size Cargo တွေဟာ Speed မပါပဲ ကပ်တွန်း ကပ်ရုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကရောင်းဝိုင်အရည်သွေး ... Torque Converter ဆီ နဲ့ ဂီယာဝိုင်တွေရဲ့ အပူချိန်ခံနိုင်စွမ်း Heat Resistance၊ ပြီးတော့ ရေတိုင်ကီ-ရေပန့်-သာမိုစတပ် Radiator / Water Pump / Thermostat တွေရဲ့ အလုပ်လုပ် နိုင်စွမ်း အခြေနေကို စက္ကန့်အခြေခံပြီး အသေးစိပ်ကို စစ်... ကလပ်စနစ်အတွက် ကလပ်ဘော-ကလပ်ဆာဗို-ကလပ်ဆင်ဆာတွေရဲ့ အမြင့်ဆုံး တွန်းနိုင်/ဆန့်နိုင်တဲ့ Push-Pull Engagement Point ကို စစ်ပြီး ကလပ်ပလိတ်တွေရဲ့ အထူပါးနဲ့ ခံနိုင်ဝန်ကို Idle-load-unload အတွက် min-normal-max အလိုက် အဆင့်ဆင့်သုံးသပ်ပြီးမှ ရလာတဲ့ရလာဒ်ပေါ် အခြေခံပြီး Parameter Formula အတိုင်း လီဘာဆင်ဆာ ကို ACC Padel Calibration ခေါ်တဲ့ ပြန်ချိန်ညှိကိုလုပ်ပေးရမယ်...
EGR စနစ်အတွက်တော့ High RPM ရမယ့် Regeneration အခွင့်ရေး မို့ Exhaust System Parameter တွေကို အကုန်လုံးစတင်အခြေနေ Re-initiate Status ဖြစ်အောင် အချိန်ကိုက်လုပ်ခဲ့ပေးရမယ်...
ဆီပို့ ဆီပြန် Injection စနစ် ပုံမှန်အတိုင်းစစ်...
Pull Power အတွက် Counter Weight အလိုက် ၇တန် ကနေ ၂၁တန် ထိ ပုံမှန်အတိုင်းအဆင့်ဆင့်စစ်...
အခြေနေ အားလုံး နာရီ၁၂၀ အတွင်း သင့်တော်တဲ့ရလာဒ်တွေရှိတာကြောင့် အသင့်အနေထားဖြစ်ပြီ... Heavy Job ကနေ Easy Job ဖြစ်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကတော့ 9.9 Speed…
လေးလေးနက်နက်တစ်ခု ဆန္ဒပြုမိတယ် Solemn Wish…
(ရင်နှင့်ရင်းတဲ့) ကိုရစ်ကီကျော်- ၀၉-၇၈ ၅၅၅ ၉၁၁၉ မြန်မာမော်တော်(မန္တလေး ဆားဗစ်စင်တာ) အမှတ် ၅၁၊ ၅၈ လမ်း၊ မင်္ဂလာလမ်း နှင့် ရတနာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုံ ၁၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။